I-Mongolia - World Tourism Portal
Yini ukubona eMongolia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMongolia
Bukela ividiyo ekhuluma ngeMongolia
IMongolia yizwe elivaliwe phakathi nendawo China futhi Russia. Kungumsebenzi omkhulu ohlanganisa umhlaba nesibhakabhaka, futhi ungenye yezindawo ezimbalwa zokugcina emhlabeni lapho impilo ye-nomadic isisiko eliphilayo. IMongolia ingaba nezincazelo ezahlukahlukene zokuhlala ngokwamasiko, amasiko nezindawo. IMongolia iqukethe umlando we-Outer Mongolia ongokomlando. Isifundazwe sase-Inner Mongolia sihlukaniswe ngokwendawo nangokwezepolitiki futhi sisendaweni engasenyakatho neChina, nokho sinqamula iMongolia.
Njengoba kunabantu abangu-1.7 kuphela ngekhilomitha, iMongolia inabantu abasemazingeni aphansi kakhulu kuwo wonke amazwe azimele emhlabeni, futhi kungukuntenga okukhulu lokhu okumangazayo okuyisikhalazo esihlala njalo sezwe, okwenza umhambi, njengoba enza, abe nobudlelwano bemvelo obusondelene nemvelo. kanye nezakhamuzi zakhona.
IMongolia yaziwa ngokuthi yi "Land of Blue Skies," futhi ngesizathu esihle: kunezinsuku ezingama-250 ezinelanga unyaka nonyaka, ngakho-ke kudingeka izibuko ezinhle.
Isimo sezulu sibanda kakhulu ebusika, sehle saya ku-30º C kwezinye izingxenye. Isimo sezulu phakathi nehlobo siyahluka, kepha ngokuvamile siyashisa. Ngaphandle kwehlane laseGobi, lesi sikhathi sonyaka siphawulwa ngemvula kwezinye izindawo nobusuku obubandayo.
Yize abahambi abaningi bekhetha ukuza eMongolia phakathi kukaMeyi noSepthemba, nenani eliphakeme kakhulu lezivakashi ngoJulayi ngesikhathi seholide laseNaadam, ezinye izinkathi zonyaka nazo zingakuhambela kahle. Ngomqondo nobuhle bemvelo ngaphandle kwezixuku, izinkathi zamahlombe kusuka ngoMashi kuya kuMeyi noSepthemba kuya kuLwezi zihamba phambili. U-Okthoba yisikhathi esihle kakhulu sokuvakasha, futhi uNovemba akephuzi kakhulu ukuya eMongolia. Kusafudumele phakathi nezinsuku kepha kubanda ebusuku.
Abavakashi abesabi ukubanda, ukuya eMongolia kusuka ngoNovemba kuze kube uNyaka oMusha weLunar kuseyinketho. Ezokuvakasha kwasebusika ziyindawo ethuthukayo yomkhakha wezokuvakasha waseMongolia. Isipiliyoni esizuzise kakhulu kuzoba ngukuhambela ama-nomads, nokubona ukucula, ukudansa, ukubambana kanye nomjaho wamahhashi wasebusika ngesikhathi se- “Tsagaan Sar”, umgubho woNyaka Omusha (weLunar).
Umlando weMongolia yasendulo yaqala emuva ngekhulu lesithathu leminyaka lapho i-Xiongnu yaqala ukubusa phakathi kwezinye izizwe eziningi ezazimile.
Ngenxa yokungafundi kanye nendlela yokuphila okungahleliwe, okuncane okuqoshwe ngabakwaHuns ngokwabo. Baqala ukuvela emlandweni waseShayina orekhodwe ngokuthi "bangama-barbarians" okwakhiwa ngabo izindonga. Lolo donga kamuva lwaziwa ngokuthi i- I-Great Wall yaseChina.
IMongolia inkulu ngokwedlula kabili iTexas futhi icishe ilingane ne-Alaska. Indawo yakhona ingamakhilomitha ayizigidi eziyi-1.6 (603,000 mi²), ephindwe kane ngosayizi we Japan futhi icishe iphindwe kabili leyaseMpumalanga Yurophu.
Lokhu kwenza iMongolia ibe yizwe lesithupha ngobukhulu e-Asia kanye ne-19 emhlabeni, kepha abantu bayizigidi ezintathu kuphela, okwenza iMongolia ibe ngenye yezindawo ezingenabantu abaningi e-Asia.
I-40% yabantu ihlala enhlokodolobha ye-Ulan Bator noma Ulaanbaatar kushiya isikhala esiningi sohambo. Vele, uGobi ugcwele ngisho nangaphansi abantu abaningi.
Cishe abanye abantu abangama-40% bahlakazeka kulo lonke elaseMongolia benekhanda labo eliyizimvu, lezimbuzi, izinkomo, amahhashi namakamela. Kunezifundazwe ezingama-56, ezibizwa nge- aimag. Inhloso ngayinye inedolobha noma idolobha eliphakathi nendawo nezifundazwe ezingaba ngu-21-15 ezibizwa ngokuthi yi-soum.
I-70% yaseMongolia ingaphansi kweminyaka engama-35 futhi abesilisa nabesifazane bayalingana kahle. Ama-84% angamaKhalkha Mongols, ama-Kazakh angama-6% namanye amaqembu ayi-10%.
Ama-90% amaMongols alandela ingxubevange yobuBuddha yamaSunti kanti ama-shamanism kanti ama-10% asele alandela izinkolo ezahlukahlukene, ikakhulukazi ama-Islam nobuKristu.
IMongolia yikhaya “lemidlalo emithathu yamadoda”: ukubambana, ukugibela amahhashi kanye nomcibisheli, futhi lemicimbi emithathu yezemidlalo yenzeka minyaka yonke emkhosini weNaadam.
INaadam yiholide likazwelonke laseMongolia eligubha ngomhla ka-11 kuJulayi. Ngalezi zinsuku wonke amaMongolia abuke noma alalele umcimbi wonke owenzeka enhlokodolobha i-Ulaanbaatar ngeNational Television neRadio yaseMongolia. Eminye imikhosi eminingi emincane yeNaadam yenzeka ezindaweni ezihlokiwe ezahlukahlukene (izifundazwe) ezweni lonke ngenyanga kaJulayi, futhi le mibhiyozo yeNaadam ihlinzeka ngokubhekisisa isenzo.
Kukholakala ukuthi ukugujwa kukaNaadam kwaqala ngokuqhamuka koMbuso WaseMongolia Omkhulu njengoChinggis (owaziwa nangokuthi isu likaGenghis) Khan lokugcina impi yakhe ilungile. Ngemuva kokuwa kombuso, imincintiswano ibanjwa phakathi nemikhosi yezenkolo, futhi selokhu kwagujwa ubukhomanisi kwagujwa usuku lwayo lokuzalwa.
Le nganekwane ithi ezikhathini zakudala owesifazane owayegqoke njengendoda wawina umncintiswano wokulwa kanye. Kungakho isifuba esivulekile nezingubo ezinde zokulwa, ezibizwa nge- “zodog”, zenzelwe ukukhombisa ukuthi wonke umuntu obambe iqhaza ngowesilisa. Ama-wrestlers afaka iziqu zemfushane, "shuudag", namabhuzu aseMongolia, "gutal". Imivimbo ephuzi emiseleni yezigqoko ze-wrestlers ibonisa inani lezikhathi lapho i-wrestler yayingumpetha eNaadam.
NguNaadam kuphela onikeza izihloko ezisemthethweni iziqu ezisemthethweni. Imiqhudelwano yezimpi yaseMongolia ibe nemijikelezo eyisishiyagalolunye noma eyishumi ngokuya ngenombolo (512 noma i-1024) ama-wrestlers abhaliselwe umncintiswano ngalowo nyaka. Uma i-wrestler iwina izindondo ezinhlanu, izonikezwa isihloko esithi "Nachin" (inyoni), imizuliswano eyisithupha - iHartsaga (hawk), imijikelezo eyisikhombisa - uZaan (indlovu), imizuliswano eyisishiyagalombili - uGaruda (Ukhozi), imijikelezo eyisishiyagalolunye - u-Arslan (ibhubesi ) neshumi - i-Avarga (Titan).
Azikho izigaba ezisindayo emiqhudelwaneni yeMongolia Wrestling kodwa kunomkhawulo wesikhathi wamaminithi angama-30, uma ama-wrestler engakwazi ukugumbuqela omunye komunye, onompempe basebenzise inkatho ngesikhundla esingcono esivame ukuhlalisa umdlalo. Owe noma umzimba wakhe uthinte umhlabathi ulahlekelwa umdlalo.
Imidlalo yaseMongolia Wrestling ihanjelwa imizuzwana enendima yayo ukusiza labo ababambana ngezihlakala kuzo zonke izinto nokubakhuthaza ukuba baphumelele ngokunqonqoza ngamabhusha abo. Baphinde bacule izingoma zokudumisa nezihloko kubaphikisi abaholayo bobabili amaphiko, entshonalanga nasempumalanga, emuva komzuliswano wesihlanu nowesikhombisa. Onompempe baqapha le mithetho kepha abantu nabalandeli bangamajaji okugcina. Bazokhuluma futhi basakaze izwi lomlomo ngokuthi ubani ozolandela unyaka olandelayo.
Umkhosi weGolide Eagle e-Ölgii ngempelasonto yokuqala ka-Okthoba wumbuthano omkhulu kunayo yonke emhlabeni wabazingeli bokhozi. Umcimbi uvame ukuba nabazingeli abangamaKazakh abangama-60 kuye kwangama-70 abonisa amakhono abo. Lemicimbi ifaka ukuthi izinkozi zabo zegolide zindize kubo be-oda futhi bebamba u-fox fur bedonswa ihhashi livela kuthango oluseduzane nentaba. Lo mcimbi ubuye unemidlalo yendabuko yamaKazakh efana noKokpar (we-tug-of-war phezu kwesidumbu sembuzi ngenkathi egibele amahhashi), uTiyn Teru (umjaho ocijile wokuthatha uhlamvu lwemali ngenkathi egibele ihhashi), noKyz Kuar (“ukujaha amantombazane , "Kungumjaho phakathi kwendoda nowesifazane lapho owesifazane eshaya khona indoda lapho izama ukubambelela). Umkhosi uphinde ube nekhonsathi yesiKazakh yendabuko, umjaho wamakamela, nemibukiso yobuciko baseKazakh. Umkhosi okhozi omncane ubanjwa ngomhlaka 22 Sep edolobhaneni laseSagsai.
Nauryz festival, futhi e-Ölgii, kungumkhosi wokugubha unyaka omusha wendabuko wamaKazakhs ozoba ngomhlaka 22 Mashi. Kukhona umbukiso, ikhonsathi kanye nemincintiswano yamahhashi ngezinsuku ezimbalwa zokugubha. Yize iningi lomgubho lubandakanya ukuhambela abangane nezihlobo ukuyodla uNauryz Koje (isobho) nenyama ebunjiwe ye-mutton nenyama yamahhashi.
The umkhosi wamakamela kungumkhosi waminyaka yonke obanjelwe eGobi eseningizimu ehlelwe yi-NGO yasekhaya ukusiza ukuvikela ikamela leBactrian nendima ebalulekile eliyidlalayo ezimpilweni zabelusi abayimisola esifundeni. Izithombe ezinhle kakhulu zifaka umjaho wamakamela, imincintiswano yamakamela polo kanye nokwenza kwendabuko komculo nomdanso waseMongolia. Abafuna ukuzokwazi ukuya emkhosini ngamakamela, begqoke kahle abaseMongolia kufaka phakathi itayitela lendabuko.
Izwe lingahlukaniswa ngezigaba ezinhlanu ezihlukene ngokususelwa emasikweni nasendaweni. Lezi zifunda zihlukaniswe izifundazwe ezingama-21 nomasipala owodwa okhethekile.
kufaka i-Ulaanbaatar nesifunda esivakashele izivakashi sase-Arkhangai
Ulaanbaatar - inhlokodolobha nendawo yokuqala ukuhamba iningi eMongolia
I-Erdenet - Idolobha lesibili ngobukhulu eMongolia kwelinye lezimayini zethusi ezinkulu kakhulu emhlabeni kanye nefektri eyaziwa kakhulu yikhaphethi
I-Hovd - idolobha elinomlando ezimpambanweni zesiko lamaMongol nesiko laseKazakh
Mörön - inhlokodolobha yesifundazwe saseHövsgöl
Ölgii - Idolobha laseKazakh elisekhoneni elisentshonalanga lesifundazwe saseBayan-Ölgii
I-Tsetserleg - inhlokodolobha yesifundazwe sase-Arkhangai
IKarakorum - Inhlokodolobha yasendulo yaseMongol eyasungulwa nguGenghis Khan
Uliastai- inhlokodolobha yesifundazwe saseZavhan
Ondorkhaan - inhlokodolobha yesifundazwe saseKhentii
IDalanzadgad - inhlokodolobha yesifundazwe saseNingizimu Gobi
I-Altai Tavan Bogd National Park - ikhaya lezintaba eziphakeme kakhulu neqhwa elikhulu kunazo zonke eMongolia, kanye nabazingeli bokhozi baseKazakh.
I-Uvs Nuur Lake, isifundazwe i-Uvs - Ichibi elikhulu kunawo wonke eMongolia nendawo yamagugu emhlabeni.
Isigodi Esingcwele soMfula iTuul Nomad - Umfula iTuul ungomunye wemifula emide kakhulu yezwe, ugeleza usuka eKhentii Mountain Range. Isigodi somfula besilokhu sibizwa ngokuthi singcwele ngamakhulu eminyaka njengoba behlonipha imvelo ikakhulukazi imifula namanzi angaphezulu.
IChambgis Tourist Base Camp - etholakala empumalanga yeGorkhi / Terelj National Park, osebeni lomfula iTuul.
I-Gun-Galuut Nature Reserve - Indawo efanelekela kunazo zonke yezendawo yezemvelo eMongolia.
IGorkhi-Terelj National Park - Ipaki kazwelonke ibanga elingamakhilomitha angama-70 empumalanga ye-Ulaanbaatar
I-Xar Xorin (Kharkorum) - Inhloko-dolobha yoMbuso WaseMongolia ngemuva kukaGhenggis Khan.
I-Khovsgol Lake, Khatgal - Ichibi elikhulu le-alpine.
Darhad Valley - Ikhaya kubantu bakwaReindeer.
I-Khustain Nuruu National Park - Ipaki likaKhustain Nuruu noma iHustai National liyikhaya lamahhashi asendle angamaTakhi (owaziwa nangokuthi yiPrzewalski's Horse). Lawa ngamahhashi asendle eqiniso angakaze akhishwe ezindlini.
IGobi Gurvan Saikhan National Park - IKhongoryn Els (izindunduma zesihlabathi), i-Yol Canyon, i-Bayanzag-Red Flaming Cliffs neKhermen Tsav
IMongolia yizwe elikhulu elinokuhamba okubi, ngakho ukuhambela izifundazwe eziningi kakhulu kuzodinga isikhathi esiningi esichithwa ekuhambeni. I-Hôvsgôl (noma i- "Hövsgöl"), esifundazweni saseHövsgöl, yinhle futhi itholakala kalula ukusuka eKhatgal. Kunokwakhiwa okuncane eMongolia, kepha isigodlo sezindela sase-Amarbaysgalant, esifundazweni iSelenge, phakathi kwendawo, sikufanele ukubona. Imayini yethusi evulekile ye-Erdenet, imayini yethusi enkulu kunazo zonke e-Asia, esifundazweni i-Orhon.
Okufanele ukwenze eMongolia
vakashela i-Reindeer Herders (i-Tsaatan Community), i-Tsagaan nuur, i-Khovsgol (iNtshonalanga ye-Khovsgol echibini, ukusuka eMoron drive WNW, esedlule esikhumulweni sezindiza, iya e-Ulaan Uul futhi uqhubeke usenyakatho. Amanzi aphezulu angenza imigwaqo ibe nzima.). Abelusi be-Reindeer bahlala ezintabeni eziphakemeyo eziphakemeyo. Kufanele ugibele amahhashi noma i-reindeer esuka ku-Tsagaan nuur. Kungaba uhambo olude kanzima.
Canoeing yaseMongolia. Ukuvakasha komfula, isikebhe phansi kweminye yemifula emikhulu yaseMongolia.
IKamu Lasekhaya leBonda Lake esigodini saseKhatgal eduze neLake Khovsgol linikezela ngokudoba, ukuhamba ngezinyawo, uhambo lwasebusika, ukuvakasha ngezikhathi ezithile, ukugibela amahhashi, ukuhambela abelusi be-reindeer kanye ne-Darhad Valley. Ngokuhamba ngehhashi, kungenzeka ukuthi uvakashele iLake Khovsgol enhle futhi uhlangane nabakwaTsataan (abafundisi be-reindeer herders) abahlala ezindaweni eziseduze nenyakatho yendawo yaseKhovsgol. Lesi sifunda sibukeka kahle, sakhiwe endaweni ephakeme ngamamitha ayi-1645 ezintabeni eziluhlaza okotshani, simbozwe ngamahlathi amakhulu kaphayini futhi sinezindawo ezinkulu zedlelo namachibi amahhashi, futhi sicebile ngezilwane zasendle: leli chibi linezinhlobo eziyisishiyagalolunye zezinhlanzi kanti nezindawo ezizungezile zigcwele izimvu, izimbuzi, ama-elk nezinhlobo ezingaphezu kuka-430 zezinyoni. Izizwe zaseMongolia, iKhalh, iDarhad, iBuriad, iHotgoid nezizwe zase-Urianhai zihlala eduzane. Ikamu linendawo yokugeza eshisayo, i-sauna, i-inthanethi kanye nendawo yokudlela enezidlo zaseMongolia nezaseYurophu.
I-Mongolia Engenayo I-Operator I-Samar Magic Tours inikeza izinkambo eziklanyelwe ngokwezifiso nezikhathi zokuthatha izithombe, ukuvakasha komlando namasiko, uhambo oluya e-Land of Genghis Khan, spas kanye neziphethu ezishisayo, ukubuka kwezinyoni, i-botany, imvelo, ugwadule lwaseGobi, ukudoba, Naadam Uhambo lomkhosi, uhambo lwangasese, ukugibela amahhashi, ukugibela amakamela, ukuvakasha okungaphandle komgwaqo i-4WD, nokuhamba okunethezeka.
Uhlobo lwemali lwaseMongolia yi-tögrög (төгрөг), ephinde yabhalwa ngokuthi i-tugrik, i-tugrug noma i-togrog, uphawu lwe-Unicode nolwasendaweni: "₮", uphawu lwe-ISO: MNT. Kukhona cishe i-2,600 tugrik ye-USD1 noma i-MNT3,000 = EUR1.
I-cashmere yaseMongolia yaziwa njengehamba phambili emhlabeni. Izingubo nezingubo zokulala ezenziwe nge-cashmere zingatholakala ezitolo eziningi
IMongolia idume ngezimayini zayo zethusi i-Erdenet ne-Oyu Tolgoi. Amabhukhimakhi we-Copper ayizikhumbuzo ezinhle futhi le souvenir yensimbi ye-USD1 iyathengiswa ezitolo eziyisikhumbuzo zase-Ulaanbaatar.
Imidwebo yabadwebi bendawo ithengwa kahle eMongolia (isikhungo sokudweba sendawo sendawo sisebenza ngokuxhumanisa: 47.928958, 106.928024, "N + 106 ° 55'40.9 ″ E / @ 47.9289438,106.9280278,15).
I-Felt poker-work iyathengiswa e-Erdenet.
Qaphela ukuthi akukho emthethweni ukukhipha amasosha okulwa ezweni ngaphandle kwemvume ekhethekile.
Imakethe enkulu evulekile, iNarantuul ("The Black Market"), e-Ulaanbaatar inikezela ngamanani aphansi kakhulu kunoma yini. Qaphela amaphakethe amaningi ngisho nabahlaseli lapho. Lokhu kungaba yindawo enhle yokuthola amabhangqa amahle. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezitayela zaseMongolia, kusuka kokunambitheka kuya kokusebenziseka ngokwengeziwe, noma uthole isethi enhle yamabhuthi wesitayela saseRussia.
E-Erdenet kukhona ifektri ekhaphethi eqinisekiswe yi-ISO 9 001, futhi eyenza futhi ithengise ama-slipper enziwe ngodoti.
Okuyindida emaphandleni aseMongolia yi-mutton noma imvu. Inyama ishaya imenyu ngezikhathi ezithile. Lapha, cishe i-MNT8,000-10,000 izothenga ipuleti elikhulu elithwe ngama-noodle othosiwe kanye nesigaxa se-mutton. Ngasohlangothini kuzoba nebhodlela elikhulu le-ketchup. UKhuhuhuur (huushoor) uyiphunga elimnandi, elinamafutha, le-pancake eligcotshwe ngemichilo ye-mutton ne-anyanisi. Abathathu kuya kwabane benza ukudla okujwayelekile. Futhi, i-bui ubiquitous (booz) ingaba nakweyiphi i-canteen edolobheni noma emaphandleni. Ama-Buuz ayalingana ne-khuushuur ngoba zingama-dumplings amakhulu agxishwe i-mutton no-anyanisi, noma kunjalo antshontshiwe kunokuba athosiwe. Ama-buuz ayisithupha abiza i-MNT3,000-5,000 (USD1.50-USD2.00) futhi akhonze eyodwa.
I-boodog noma imbuzi / i-marmot barbecue kufanelekile ukubhekana nayo. Cishe i-MNT100,000-200,000, umuntu ophikisana nomnumzane uzokhipha isibhamu sakhe, adubule i-marmot bese eyipheka esebenzisa amatshe ashisayo esikhunjeni sayo ngaphandle kwembiza. Emigqeni efanayo ne-boodog kukhona i-khorkhog (eyenziwe nge-mutton), elungiselelwe ngokwakha umlilo, iphonsa amatshe emlilweni ize ishise ngokubomvu, ukubeka amanzi, amatshe ashisayo, u-anyanisi, amazambane, izaqathi, futhi, ekugcineni, i-mutton ukugoqa, ungene kupulpiti enkulu evaliwe; vumela ikhebula lishise ngomlilo imizuzu engama-30-60; uyivule ngokucophelela, njengoba phezulu izophuma ngokungenakuphikiswa namajusi ashisayo aphuma ngaphandle; uma nje i-kettle selivuliwe, futhi konke ukulimala kutholakele, kudle okuphakathi kweshishi, kufaka nomhluzi osawoti. Le ndlela yokupheka yenza ukunambitheka kwe-mutton kuthambe futhi kube namanzi, njenge-turkey ethosiwe kancane. Abaqondisi bangahlela lesi sidlo ehlobo.
I-boodog nayo yenziwa enye inyama, imvamisa imbuzi, futhi iyafana ne-khorhog ngomehluko owodwa omkhulu: inyama, imifino, amanzi namatshe kuphekwe ngaphakathi kwesikhumba sesilwane. Bayifaka isikhumba ngokucophelela, bese bebopha izimbobo emilenzeni nasehlangothini lwasemuva, bafake ukudla namatshe ashisayo ngaphakathi, babophe umphimbo uvalwe, bawukhe upheke imizuzu engama-30.
Iminyaka yobudala yokuphuza / yokuthenga utshwala i-18.
Isiphuzo sikazwelonke yi-Airag. (Iyatholakala ngokwesibonelo ematendeni endabuko "ama-ger" e-Ulan Bator emnyango omkhulu we-Gandantegchinlen Monastery, i-GPS yedesimali ixhumanisa uN47.92069 E106.89467 naseWest Market N47.91118 E106.83569). Lesi isiphuzo sasehlobo esenziwe ubisi lwe-mare olubilisiwe, futhi empeleni ukunambitheka okutholakele. Okuqukethwe utshwala kungaphansi kwalolo bhiya, kepha kungaba nemiphumela ebonakalayo. Labo abangajwayele ukuphuza imikhiqizo yobisi olunoshukela bangaba nesifo sohudo; kamuva isisu sijwayela. Lokhu kufanele kwenzeke okokuqala kodwa. Kunezindlela eziningi zokuchaza ukunambitheka, kusuka ku-bile-like kuya engxube kakhilimu nokhilimu omuncu. Ukuthungwa futhi kungabekwa kwabanye abantu ngoba kungahle kube kubi. Kuhle ukukhumbula ukuthi i-Airag ingubisi futhi ingumthombo wezakhamzimba. Ngemuva kosuku lokugibela empeleni kungaqabula impela, uma usuthole ukunambitheka kwalo.
Itiye lobisi yinto yokuqala enikezwe izivakashi kwi-ger; empeleni inkomishi yobisi olubilisiwe namanzi, ngesinye isikhathi izingcezu ezimbalwa zeqabunga letiye ziphonswe ngesilinganiso esihle. Ukubekezelela kungenziwa ngokuphuza ubisi oluningi ngaphambi kokuhlala ngoba aliphuzi okuningi, ngaphandle kokuthi mhlawumbe amanzi abilisiwe uma eceliwe isikhathi eside sokuhlala. Ukudla okujwayelekile kwendabuko okufana neyogathi eyomile nokunye okunjalo kudinga i-acclimatization kubisi. Iziphuzo ezibandayo azitholakali emaphandleni (ngaphandle kokuthi ziphuza ngqo emfuleni, ezinganconywa).
Zama i-vodka eyenziwe ekhaya. Ngokuvamile kwenziwa kusuka ku-yogurt noma ubisi oluhlanganisiwe. Akunambitha okuxakile. Ukudubula kokuqala kunomthelela omncane, ekuqaleni, kepha ukukhahlela emizuzwini embalwa kamuva. Iningi labantu eMongolia livame ukuphuza lokhu ngenxa yezokwelapha. Okokuqala, shisa i-vodka, bese ufaka uwoyela okhethekile owenziwe nobisi. Ukushisa ngokweqile kubangela ubumpumputhe. Abantu baseMongolia babiza izintshumayelo zabo zikazwelonke ze-vodka nermel areehk (“distod vodka”) noma yin yum (“Izinto eziqinile”). Kunama-vodkas amaningi wesitayela saseRussia athengiswa ezweni lonke. Okuhamba phambili yiChinggis Khaan vodka, Soyombo noGolden Chinggis.
Amabhiya aseNtshonalanga, ukusuka eMiller kuya e-Heineken angatholakala e-Ulaanbaatar. Bathengisa iBudweiser - hhayi iMelika Bud kodwa iCzech Budweiser. Ubhiya wasendaweni, onjengeChingiss, Gem Grand, Borgio noma Sengur ulungile.
Ngeshwa, i-xenophobia idlangile, futhi udlame olubhekiswe kwabokufika luvamile. Kunamaqembu ama-Nationalists kazwelonke aseMongolia azishintsha njengamaNazi-namaNazi futhi ahlasele abokufika: qaphela. Ikakhulu enhlokodolobha, amazinga obugebengu obunodlame aphakathi kwabaphezulu kakhulu e-Asia. Ungavumi noma usondele kunoma iyiphi indoda yaseMongolia ngaphansi kwethonya lotshwala. Cishe bonke abantu bakwamanye amazwe abaya emabha / amakilabhu ebusuku babika ukuhlaselwa kanye nolaka olujwayelekile.
Ubugebengu obunobudlova buvame ngaphandle kwenhloko-dolobha futhi ukuqapha kuyadingeka ebusuku. Izimbumbulu ezimnyama noma ezilahliwe nemigwaqo, ikakhulukazi, kufanele kugwenywe.
Ngaphandle kwe-Ulaanbaatar, iMongolia imvamisa iyindawo ephephile yokuhamba. Kodwa-ke, izehlakalo zokupakisha nokuhlatshwa kwezikhwama zikhuphukile eminyakeni yamuva, ngakho-ke gcina impahla yomuntu siqu isendaweni ephephile (amabhande emali anconywe kakhulu), ikakhulukazi ezindaweni ezinabantu abaningi noma ezindaweni lapho ukunakwa komuntu kuhlanekezelwa khona, njenge-Intanethi amathofi. Izindawo ezidumile zokwebiwa yiBlack Market (bazaar), isiteshi sesitimela kanye nezitobhu ezigcwele abantu.
Qikelela lapho uhamba ngehhashi, ngoba amaqembu alandela izivakashi abese antshontsha izimpahla zawo, kubandakanya namahhashi, ngenkathi elele ebusuku.
Izivakashi eziningi zilimala ngenxa yokuwa amahhashi. Abelusi baseMongolia bangabagibeli bochwepheshe, ngakho-ke umbono wabo wehhashi elifanele ukugibela uhlukile kakhulu kubagibeli abayitoho. Futhi, amahhashi aqeqeshwa ngokuhlukile kunasentshonalanga. Uma kulimala eMongolia, insiza yezokwelashwa kanye ne-ambulensi ingahle ibe ngamakhilomitha amaningi, kube nzima ukuthola futhi iqukethe i-minivan yaseRussia. Umshuwalense wokufuduka kwezokwelapha kufanelekile.
IMongolia inezinja ezinolaka ezingase zigijime emaphaketheni. Qaphelisisa ngabo ngoba kungenzeka bangabi bade njengezinja ezifuywayo kwenye indawo futhi bangaba ngamarabi.
Izinja zamaNomads zingaba namarabi. Njengesinyathelo sokuphepha, cabanga ngokuthola isibhamu samarabi ngaphambi kokuza.
Ungayibonisa kanjani inhlonipho eMongolia
Phuza esandleni sokudla nesandla phezulu
Thola izinto ngesandla sokudla, izintende zibheke phezulu
Ithi sawubona (sain bainuu) lapho ifika (kepha ukuyiphinda lapho ibona umuntu ofanayo kubhekwe njengengajwayelekile kubantu baseMongolia)
Thatha okungenani i-sip, noma i-nibble, yezimilo ezidliwayo
Thatha yonke into ngesandla esivulekile, intende ibheke phezulu
Bamba inkomishi phansi, hhayi ngomhlanga ophambili
Uma izinyawo zomuntu zixhumana nezomunye umuntu, manjalo baxhawulane izandla (ukwehluleka ukwenza njalo kuzobonakala njengokuthuka)
Khomba kunoma ngubani ngomunwe we-index (kusho ukungahloniphi)
Yenqaba isipho (kubhekwa njengendelelo)
Zonda ngokumelene nekholomu yokusekela
Ikhwela ngaphakathi kwegciwane
Yima, noma uncike embundwini
Cisha umlilo, noma ubeke amanzi noma iyiphi imfucumfucu kuwo (umlilo ungcwele kubantu baseMongolia)
Hamba phambi komuntu osekhulile
Jikisa i-altare noma izinto zenkolo (ngaphandle kwalapho ushiya)
Thatha ukudla kupuleti lokuhlangana ngesandla sobunxele
Thinta izigqoko zabanye abantu
Yiba nengxoxo ende ngolimi lwangaphandle phambi kwabasakazi
I-Uvs Nuur Basin
I-Orkhon Valley Cultural Landscape
Izinkinga zePetroglyphic zeMongolia Altai
IGreat Burkhan Khaldun Mountain kanye nezindawo zayo ezingcwele ezizungezile
Izindawo zomhlaba zeDauria